CLUB DES SUPPORTEURS DU FOOTBALL MALAGASY : Mpanohana mavitrika ny ekipam-pirenena - ewa.mg
CLUB DES SUPPORTEURS DU FOOTBALL MALAGASY : Mpanohana mavitrika ny ekipam-pirenena
Foot - News - Sport - CLUB DES SUPPORTEURS DU FOOTBALL MALAGASY : Mpanohana mavitrika ny ekipam-pirenena
Vonona hanohana hatramin’ny farany ny ekipam-pirenena malagasy ny Club des supporteurs du football malagasy (CSFM). Efa nanomboka tamin’ny taona 2000 no nitsangana ara-panjakana ny Club des supporteurs du football malagasy (CSFM). Mbola Scorpion no anaran’ny ekipam-pirenena tamin’izany. Nandray anjara tao anatin’ny komity nanova ny anaran’ny ekipa ho barea ny filohan’ny CSFM. Efa nahazo mari-pankasitrahana avy amin’ny federasiona malagasy ny baolina kitra (FMF) ihany koa ity fikambanana mpanohana ny baolina kitra malagasy ity. « Faly izahay fa tafakatra amin’ny dingan’ny famaranana amin’ny CAN 2019 izay atao any Caméroun ny barea an’i Madagasikara. Vonona hanohana hatrany ny ekipam-pirenena izahay », hoy ny filohan’ny CSFM, Rakotondrahova Honoré.
Misy telo ny fikambanana mpanohana ny ekipam-pirenena malagasy. Nilaza ny Sekretera jeneraly, Ranaivo Louis de Gonzague nandritra valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety nataon’ny fikambanana ny 24 oktobra 2018 fa maniry ny hanambatra izany ho iray ny CSFM mba ho “loko iray, fihetsika iray, mpilalao faha-12”. Manao antso avo ny mpitia baolina kitra ihany koa ny fikambanana hiray hina hanohana barea an’i Madagasikara ho fiarovana ny voninahi-pirenena.
Sata mifehy ny CSFM ny fanohanana ny ekipam-pirenena sy ny ekipa malagasy mifanandrina amin’ny ekipa any ivelany. Ankoatra ny fanohanana eny an-kianja dia mandray anjara amin’ny fanohanana ara-pitaovana ihany koa ny fikambanana. Betsaka ireo asa fanohanana efa nataony toy ny fanomezana fanamiana, baolina, « argent de poche »…Araka ny tarehimarika voaray, 815 ny mpikambana manana karatra ao amin’ny CSFM.
Cet article CLUB DES SUPPORTEURS DU FOOTBALL MALAGASY : Mpanohana mavitrika ny ekipam-pirenena est apparu en premier sur déliremadagascar.
NBA – Voka-dalao 28 Novembre 2018 Minnesota Timberwolves vs San Antonio Spurs
Timberwolves / 128 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Gibson 24 6/10 0/0 1/2 2 6 8 1 0 0 0 0 13 17 R. Covington 31 8/15 4/9 1/2 2 7 9 1 3 1 0 1 21 25 A. Wiggins 30 3/15 1/5 3/4 2 1 3 1 3 2 2 0 10 1 K. Towns 28 6/11 2/4 2/2 5 6 11 5 3 2 4 1 16 26 J. Teague 24 3/5 0/1 1/1 0 0 0 9 1 3 1 1 7 17 D. Saric 17 4/8 2/4 0/1 1 5 6 0 1 0 0 0 10 11 A. Tolliver 7 1/2 1/2 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 4 J. Nunnally 5 0/2 0/2 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 L. Deng 7 2/3 0/1 1/1 0 1 1 1 2 1 0 0 5 7 G. Dieng 15 4/5 0/0 0/0 1 3 4 1 1 0 1 2 8 13 T. Jones 24 3/8 1/4 0/0 0 2 2 8 0 2 0 0 7 14 D. Rose 18 6/8 4/5 0/0 0 1 1 2 1 0 0 0 16 17 J. Okogie 10 4/7 3/4 1/2 0 2 2 2 3 1 0 0 12 13 Total 50/99 18/41 10/15 13 35 48 33 18 12 8 5 128 Spurs / 89 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval L. Aldridge 25 5/11 0/0 0/0 2 7 9 2 1 0 2 0 10 13 R. Gay 19 1/5 1/4 0/0 0 5 5 4 3 1 1 2 3 10 D. White 23 3/6 0/0 0/0 0 2 2 4 1 0 2 0 6 7 D. DeRozan 28 4/9 0/1 2/2 0 2 2 2 2 0 5 4 10 8 B. Forbes 21 2/9 2/6 0/0 0 1 1 1 2 0 2 0 6 -1 C. Metu 12 0/4 0/0 2/2 1 3 4 2 1 0 0 0 2 4 Q. Pondexter 12 3/4 1/1 6/6 0 4 4 2 2 0 1 0 13 17 D. Bertans 17 3/7 0/3 0/0 3 2 5 1 1 0 0 1 6 9 D. Cunningham 22 1/3 0/1 0/0 1 3 4 0 1 0 2 0 2 2 J. Poeltl 21 7/10 0/0 0/0 5 3 8 0 2 0 2 1 14 18 P. Mills 18 2/7 1/4 1/1 0 1 1 3 0 0 0 0 6 5 M. Belinelli 21 3/11 3/7 2/2 0 1 1 2 1 0 1 0 11 5 Total 34/86 8/27 13/13 12 34 46 23 17 1 18 8 89
NBA – Voka-dalao 5 Decembre 2018 – Oklahoma City Thunder vs Brooklyn Nets
Nets / 112 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Harris 34 6/12 3/4 4/5 1 6 7 2 5 1 0 0 19 22 R. Hollis-Jefferson 22 0/2 0/0 2/2 1 8 9 6 2 0 0 0 2 15 J. Allen 28 5/14 0/2 5/5 5 3 8 4 4 0 2 1 15 17 D. Russell 30 6/13 3/7 2/2 0 1 1 4 0 2 6 0 17 11 A. Crabbe 37 7/15 7/13 1/3 1 3 4 2 4 1 3 0 22 16 E. Davis 20 2/3 0/0 0/0 1 6 7 0 2 1 0 0 4 11 J. Dudley 20 2/5 0/2 0/0 0 4 4 1 3 0 1 1 4 6 D. Carroll 19 3/10 1/4 5/5 1 4 5 0 1 1 1 0 12 10 S. Dinwiddie 30 6/11 1/4 4/8 0 0 0 2 3 1 1 2 17 12 S. Napier 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 Total 37/86 15/36 23/30 10 35 45 21 24 7 14 4 112 Thunder / 114 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P. George 37 15/27 6/13 11/14 3 12 15 4 2 0 2 1 47 50 J. Grant 27 2/6 1/4 0/0 0 5 5 2 4 1 1 3 5 11 S. Adams 31 7/11 0/0 1/6 5 3 8 2 3 2 3 1 15 16 R. Westbrook 40 9/23 2/9 1/2 2 13 15 17 5 1 2 0 21 37 T. Ferguson 26 3/7 2/4 0/0 0 1 1 0 3 0 0 0 8 5 N. Noel 14 2/5 0/0 1/2 3 6 9 0 2 1 1 1 5 11 P. Patterson 7 0/3 0/1 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 -2 D. Schroder 30 5/12 2/4 0/0 1 1 2 2 1 0 0 0 12 9 A. Abrines 19 0/2 0/2 0/0 0 1 1 1 1 3 1 0 0 2 H. Diallo 5 0/1 0/0 1/2 2 0 2 0 0 0 2 0 1 -1 D. Burton 4 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 -2 Total 43/99 13/38 15/26 17 43 60 28 23 8 13 6 114
KITRA – FIFANINANANA AFRIKANA :: Mety hifandona amin’ny ekipan’ i Dax ny Elgeco Plus raha tafita
Tontosa, omaly, ny antsapaka ho an’ireo klioba mandray anjara amin’ny fifaninanana kaontinantaly aty Afrika dia ny fiadiana ny «Amboaran’ny CAF» sy ny «Caf Champions League». Klioba iray avy any Guinée Equatoriale, Depor­tivo Unidad, no hifanandrina amin’ny ekipan’ny Elgeco Plus, tompon’ny amboaran’i Madagasikara, eo amin’ny fiadiana ny amboaran’ny Kaonfederasiona. Raha tafita amin’izany izy ireo ka tafavoaka ho mpandresy eo anatrehan’ny Zimamoto avy any Zanzibar ny Kaizer Chiefs, dia hifanandrina eo amin’ny 1 /16-n-dalana ny Elgeco Plus sy ity ekipa hilalaovan’i Arohasina Andriamirado na i Dax avy atsy Afrika Atsimo ity. Hotan­terahina amin’ny 27 na 28 novambra ho avy izao ny lalao mandroso, izay hihaonan’ny Elgeco Plus amin’ny klioba avy any Guinée Equa­toriale, ka isika no mpa­mpiantrano. Hanafika any an-toerana izy ireo, amin’ny 4 na 5 desambra ho avy izao. Klioba avy any Zimbaboe, FC Platinium, kosa no hifa­nandrina amin’ny Cnaps Sport, tompondakan’i Mada­gasikara, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika na ny “Caf Champions League”. Hampiantrano ny lalao mandroso ihany koa ny Cnaps Sport amin’ny 27 na 28 novambra ary hiatrika ny lalao miverina any an-tanin’ olona amin’ny 4 na 5 desambra. Samy mbola tsy zatra miatrika fifaninanana kaontinantaly na ny FC Platinium, amin’izao anarany izao, na ny Deportivo Unidad avy ao Malabo. Na izany aza anefa dia tombony ho azy ireo ny fampiantranoana ny lalao miverina. Raha samy tafita ireo solontenantsika ireo dia samy hampiantrano ny lalao miverina avokoa. Izay tafavoaka amin’ny Desportivo Primeiro de Agosto avy any Angola sy ny AS Otoho avy any amin’ny repoblika demokratikan’i Congo no hifanandrina amin’ny Cnaps Sport. Izay mandresy amin’ny Kaizer Chiefs avy any Afrika Atsimo sy Al Ittihad avy any Libia no hihaona amin’ny Elgeco Plus. L’article KITRA – FIFANINANANA AFRIKANA :: Mety hifandona amin’ny ekipan’ i Dax ny Elgeco Plus raha tafita est apparu en premier sur AoRaha.
“E-safari rally 2020” : tompon-daka ny Malagasy
Nifarana, ny alahady lasa teo, ny “E-safari rally 2020”, fifaninanana mamily fiarakodia amin’ny alalan’ny solosaina na ny “rallye virtuel”, nokarakarain-dry zareo Kenyanina. No­rombahin’ny mpanamory malagasy ny fandresena, tamin’ity. Lasan’Andritiana Mathieu (BSR Andritiana), nitondra ny fiara Mitsubishi space star 5, ny voalohany. Nahazo isa 434 ny tovolahy nandritra ny fanatanterahana ny hazakazaka tao anatin’ny hateloana. Raha tsiahivina, nanana isa 157 izy teo amin’ny andro voalohany ary 150 teo amin’ny andro faharoa, raha 127 ny fahatelo. Azo lazaina fa nanjakan’ny Malagasy ity fihaonana ity satria mbola Malagasy ihany koa ny faharoa, tamin’ny alalan-dRakotondrabesa Falihery (Falix 101), niaraka tamin’ny fiara Mitsubishi space star 5 ihany koa. 366 ny fitambaran’ny isa voaangony, tamin’ity, izay mitsinjara ho 133 teo amin’ny dingana voalohany, 141 ny faharoa ary 92 ny fahatelo. Mbola mpanamory malagasy ihany koa ny fahatelo, tamin’ny alalan’i Ericbegu, nahazo isa 363. Tany aminn’ny laharana fahefatra vao nahitana vahiny, lasan’i Brian Crossett (Gravy­quinn), nanana isa 352.TompondakaL’article “E-safari rally 2020” : tompon-daka ny Malagasy a été récupéré chez Newsmada.
Record vaovao ho an’i Jimmer Fredette, nahavita 75 points tany Chine!
Nifindra monina tany amin’ny CBA, ny ligy sinoa, nandritra ny telo taona izay, manakatona varavarana ho amin’ny fiverenana any amin’ny NBA ve i Jimmer Fredette (29 taona) Nandalo tamin’ny Sacramento, Chicago, New Orleans sy New York, tsy nahavita ny namiratra tamin’ny NBA mihitsy izy. Na izany na tsy izany, ilay mpilalao nalaza tao amin’y Université BYU dia mitohy mamiratra any amin’ny ekipany ny Shanghai Sharks, izy izao dia mihodina ny 38.3 points de moyenne hatramin’ny fiandohan’ny taom-pilalaovana. Omaly, nanao tamin’ny Beikong, dia nanaporofo ity mpitifitra ity fa mbola mihazona ny fahaizany izy amin’izao record manokana ho azy izao : 75 points à 7/10 amin’ny 3-points (ny record-ny taloha dia 73 points) ka 40 tamin’ny quart-temps farany, izany dia tsy nanakana ny faharesen’ny Sharks 137 – 136 ! Nahavita 8 rebonds, 7 passes et 4 interceptions ihany koa izy tamin’io lalao io. Hanaitra an’ireo Franchise NBA ve izany ? Ho hitantsika eo.
NBA – Voka-dalao 5 Decembre 2018 – Minnesota Timberwolves vs Charlotte Hornets
Timberwolves / 121 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Gibson 25 4/5 2/3 1/2 1 9 10 1 1 0 0 1 11 21 R. Covington 33 6/9 1/3 4/4 0 6 6 1 4 2 2 1 17 22 A. Wiggins 34 11/19 3/5 1/3 1 5 6 5 1 0 4 1 26 24 K. Towns 36 13/20 4/5 5/7 4 8 12 3 4 2 2 6 35 47 J. Teague 34 1/6 0/1 1/1 0 2 2 18 2 1 3 2 3 18 D. Saric 21 3/8 2/3 0/0 2 5 7 1 1 0 0 0 8 11 A. Tolliver 2 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 J. Nunnally 2 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 G. Dieng 12 2/4 0/1 1/1 1 4 5 0 1 0 2 0 5 6 T. Jones 14 0/2 0/1 0/0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 -1 D. Rose 26 8/15 0/2 0/2 1 0 1 3 0 0 1 0 16 10 J. Okogie 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 48/89 12/24 13/20 10 40 50 34 15 6 15 11 121 Hornets / 104 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval M. Kidd-Gilchrist 23 4/10 1/2 0/0 5 0 5 0 1 1 2 0 9 7 N. Batum 37 7/17 3/6 1/1 2 5 7 8 1 1 0 0 18 24 C. Zeller 33 4/8 1/3 0/0 3 3 6 3 4 2 1 0 9 15 K. Walker 30 6/16 1/5 2/3 0 2 2 5 2 1 1 0 15 11 J. Lamb 30 6/18 2/5 4/5 2 9 11 2 2 1 0 0 18 19 F. Kaminsky 22 4/7 2/4 0/0 0 1 1 2 4 0 1 0 10 9 M. Bridges 21 4/9 2/5 0/0 0 2 2 1 1 0 1 0 10 7 B. Biyombo 4 0/0 0/0 1/2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 W. Hernangomez 2 2/2 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 4 6 T. Parker 15 0/4 0/0 0/0 0 2 2 5 0 0 1 0 0 2 D. Graham 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 D. Bacon 2 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 M. Monk 18 3/6 0/3 4/4 0 1 1 0 0 1 2 1 10 8 Total 40/98 12/33 12/15 13 27 40 27 15 7 10 1 104
Basket - Sport - Video
NBA – Top 10- 21 Novembre 2018
Voka-dalao 21 Nov 2018 – Golden State Warriors vs Oklahoma City Thunder
Warriors / 95 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Durant 35 11/22 1/5 4/4 1 13 14 3 2 0 6 3 27 30 D. Jones 21 2/2 0/0 0/0 0 0 0 3 2 1 2 3 4 9 Q. Cook 33 3/8 1/4 0/0 0 5 5 6 2 1 3 0 7 11 A. Iguodala 26 2/4 0/1 2/2 1 0 1 3 0 1 1 0 6 8 K. Thompson 31 10/22 3/8 4/7 0 4 4 3 4 1 2 0 27 18 J. Bell 4 1/2 0/1 3/4 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2 J. Jerebko 21 0/5 0/4 0/0 2 5 7 2 2 2 0 0 0 6 K. Looney 22 1/3 0/1 2/5 3 6 9 3 3 1 0 2 4 14 S. Livingston 17 1/4 0/0 0/0 0 0 0 1 2 0 1 1 2 0 J. Evans 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 D. Lee 27 5/11 2/5 1/2 0 2 2 0 1 1 1 0 13 8 Total 36/83 7/29 16/24 7 35 42 24 18 7 17 10 95 Thunder / 123 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P. George 35 11/24 5/12 1/3 2 7 9 5 5 2 3 0 28 26 J. Grant 34 6/10 1/3 1/3 3 8 11 1 0 2 0 1 14 23 S. Adams 33 9/14 0/0 2/2 7 4 11 2 2 2 0 0 20 30 R. Westbrook 33 5/15 1/5 0/2 0 11 11 13 4 2 4 1 11 22 T. Ferguson 6 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -1 N. Noel 15 2/3 0/0 0/0 2 1 3 0 1 0 0 2 4 8 P. Patterson 14 0/3 0/2 0/0 1 4 5 0 1 0 1 0 0 1 A. Nader 3 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 D. Schroder 28 12/19 5/6 3/3 1 3 4 4 3 1 1 0 32 33 T. Luwawu-Cabarrot 18 3/9 2/5 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 8 4 H. Diallo 17 1/6 0/2 1/2 2 4 6 2 3 0 0 1 3 6 D. Burton 3 3/3 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 7 Total 51/106 13/35 8/15 18 43 61 29 23 10 10 5 123